Saadaasha Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Saadaasha Forex Tusiyaha
Saadaasha Forex Tusiyaha
Sida magacaba ka muuqata, Saadaasha Forex Tusiyaha caawisaa ganacsatada in la saadaaliyo waxa dhici doona suuqa. Waa aalad aad u muhiim ah in ganacsatada. ganacsade kasta Xirfado iyadoo la filaayo ah waxa dhici doona suuqa mustaqbalka dhow.
Saadaasha Forex Tusiyaha waxaa soo bandhigay shaxda hoos ku gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Waxay ku siinaysaa warbixin kooban oo ka mid ah tirada guud ee dadka iibsanaya iyo kuwii alaab suuqa qaab boqolleyda. tilmaame ayaa sidoo kale siinaya faa'iido ah in la sameeyey by ganacsatada iyo sidoo kale muujiyay faa'iidada ay u xiran yihiin.
Tilmaamahan Sidoo kale waxay muujinaysaa isbeddello iyo xoogga arrimuhu on qiyaasta ah 1 si ay u 100 in wakhti dhan ah. Tan waxaa lagu soo bandhigay isticmaalaya arrow sida canaasiirta in ay yihiin soo bandhigay hoos shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Tusaale ahaan haddii aad ku Furi lahayn shaxda EUR / USD a tilmaame ayaa muujinaya doonaa arrimuhu iyo xoog isbeddel ah in labada ciyaaryahan ee lacagta gaar ah ee wakhti dhan ah. Waxay ku tusi doona waxa arrimuhu ee M1, M5, M15, M30, H1, H4 iyo D1 yihiin.
Kale oo aan ahayn bixinta macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan xaaladda hadda ee suuqa Forex ee, waxa kale oo ay muujinaysaa in ay tahay waqti ku haboon in meel la iibiyay ama iibsan a.
Tilmaamahan waa mid aad u gaar ah tan iyo markii ay xitaa kuu sheegi saadaasha wakhtiga tagay arrimuhu suuqa ee hadda. Tani dhab ahaantii waa wax qaali ah ganacsade Forex kasta tan iyo markii isagu ama iyadu ay awoodaan in ay go'aan inta amarka ku ordi doonaa uu noqon doono (sii furan). Sidoo kale, by og sida dheer isbeddel ku ordi doonaa, ganacsade ah ayaa sidoo kale waxa uu awoodaa inuu xukun wanaagsan in goobta dalabka ama ma. Tusaale ahaan haddii ganacsade ah oo kaliya alwaax in xisaabta ganacsiga isaga ama iyada oo raba in uu ku ganacsan iyo ka dib loading tilmaamahan gal shaxda ah tilmaame ayaa muujinaya saadaasha in arrimuhu dheer soo socda 1 daqiiqadii 3 seconds, ganacsade go'aamin doonaa in ganacsiga ama ma. Oo haddii tusaale ahaan ganacsade go'aansado inuu meel ganacsi, markaas ganacsade waxay noqon doontaa mid aad u heegan si uu u hubiyo waxa tilmaanta odhan doonaa ka dib 1 daqiiqadii 3 seconds ka weyn tahay; haddii tilmaame ayaa muujinaya in ay arrimuhu dheer sii, markaas ganacsade uu ka tagi doono si ay u ordaan oo haddii tilmaame wuxuu leeyahay haddii kale ganacsade saari doonaa amarka.
tilmaame ayaa sidoo kale mas'uul ka ah formation of War fallaadhihii waa. War fallaadhihii waa la aasaasay on shaxda ugu weyn ganacsiga dhamaadka gudban. fallaadho waxay muujinaysaa mid uptrends ama isbeddellada hoos. Haddii uptrend ah markaas arrow waa cagaaran. Haddii isbedel hoos markaas arrow waa guduudan yahay.
Sida loo isticmaalo Forex Tusiyaha Saadaasha in meel Xirfado.
Waxyaalaha ugu muhiimsan in la raadiyo si uu u furo Xirfado yihiin:
– Nooca fallaadhii ku sameeyay
– Boqolkiiba saadaasha
– Markii ugu tagay arrimuhu
Forex Tusiyaha Saadaasha dhigaya Iibiya a:
ganacsade waa meel iibiyay marka marka arrow waa guduudan yahay oo muujinaya isbeddel hoos iyo haddii boqolleyda saadaasha waa kor ku xusan 80% iyo marka waqtiga haray saadaaliyo yahay ugu yaraan 5 daqiiqo.
Forex Tusiyaha Saadaasha dhigaya Buy a:
ganacsade waa meel iibiyay marka marka fallaadha waa ku cagaar iyo muujinaysa uptrend ah iyo haddii boqolleyda saadaasha waa kor ku xusan 80% iyo marka waqtiga haray saadaaliyo yahay ugu yaraan 5 daqiiqo.
Amarada waa in la xiray markii calaamadaha soo horjeeda la siiyaa.
Tusaale marka in la furo amarada la isticmaalayo Tusiyaha ku Saadaasha Forex.
Saadaasha Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Saadaasha Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Saadaasha Forex Indicator.mq4?
Download Saadaasha Forex Indicator.mq4
Nuqul ka Saadaasha Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Saadaasha Forex Indicator.mq4
Saadaasha Tusiyaha Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Saadaasha Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousPIP Scazor Forex Tusiyaha
Next articleQarax Waddah Attar Forex Tusiyaha
Ahoora oscillator Forex Tusiyaha
Super Taxana Faa'iido Forex Tusiyaha
Ahoora oscillator Forex Tusiyaha Jun 25, 2019
Super Taxana Faa'iido Forex Tusiyaha Jun 21, 2019
MTF Trix Forex Tusiyaha Jun 13, 2019
Choppiness Index Forex Tusiyaha Jun 11, 2019